“စောမွန်လှရဲ့ရွှေစာရံ” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » “စောမွန်လှရဲ့ရွှေစာရံ”
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Aug 14, 2011 in Local Guides, Photography | 13 comments
“အသက်မကြီးသေးပါမောင်ရယ် ထန်းရွက်ပုတီးလေးဆွဲလို့ ရွှေစာရံကိုတစ်ခေါက်သွားအုံးမယ်”
ဆိုတဲ့သီချင်းလေးကတော့ တော်တော်များများကြားဘူးပေမယ့် ရောက်ဘူးသူလဲရှိသလို
မန္တလေးကနေပြင်ဦးလွင်ကို သွားတဲ့လမ်း ကနေသွားရင်ရွှေစာရံဘုရားကိုရောက်ပါတယ်။
မြို့သစ်က သိပ္ပံလမ်းအဆုံးအောင်ပင်လယ်ကန်ဘောင်ရောက်လို့ ဘိုးဘိုးကြီးနန်းကိုကျော်လိုက်တာနဲ့
စောမွန်လှနဲ့ပါတ်သက်နေတဲ့ မြတဘက်ရ ဘုရားကို တွေ့ရမှာပါ။
စောမွန်လှကတော့ ရှမ်းပြည်က လှပတဲ့မင်းသမီးတစ်ပါး။
ပုဂံပြည့်ရှင်ရဲ့ မိဖုယား သူနဲ့ပါတ်သက်နေတဲ့ နာမည်ကျော်ဘုရားကတော့ ရွှေစာရံဘုရားနဲ့ နားဋောင်းကျချောင်းပါဘဲ။
နေပြောက်မထိုးအောင် သစ်ပင်တွေက စီးမိုးလို့အကာအကွယ်ပေးထားတဲ့ အေးမြတဲ့လမ်းကလေးအတိုင်းစီးသွားလုိ့ နားဋောင်းကျချောင်းကိုကျော်တာနဲ့ ပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့တောင်ဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းလေးအတိုင်း လိုက်သွားရင်
ဟိုးဝေးဝေးမှာမြင်ရတာတော့ နာမယ်ကျော် ကျွဲနဖားတောင်နဲ့ ရှမ်းရိုးမတောင်တန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
ထူးခြားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ ကျွဲနဖားတောင် လေးကိုမြင်ရတာ ကြည်နူးစရာပါ။
ရွှေစာရံဘုရားက သာမန်ဘုရားဖူးတွေထက်စာရင် စောမွန်လှမင်းသမီးနဲ့ပဌာန်းဆက်ရှိတယ်
ပါတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့အနွယ်တော်တွေက ပုံမှန်လာရောက်လို့ ကုသိုလ်ပြုတတ်ကြပါတယ်။
အရှေ့ဘက်ကမြင်ရတဲ့ဘုရားစောင်းတန်းအ၀င်ဝမှာ စောမွန်လှမယ်တော်ကို ဆက်ဘို့
ခေါင်းပေါင်း ပုဝါ ပုတီးနဲ့ သစ်သီးစုံကန်တော့ပွဲတွေရောင်းတဲ့အသယ်တွေကိုစတွေ့ရပါပြီ။
ဒါကတော့ရွှေစာရံစေတီတော် အခုတော့ ကြေးပြားအသစ်တွေ ပြန်ကပ်လို့နေပါတယ်။
အနောက်ဘက်ခြမ်းကဘုရား ဒီဘုရားက ရွှေသင်္ကန်းကပ်လို့ရပါတယ်။
ဘုရားပုံသဏ္ဍန်ကတော့ ပုဂံခေတ်လက်ရာများလို့ ခံစားရမိပါတယ်။
အိမ်အပြန်လက်ဆောင် ထန်းရွက်ငါးနဲ့ထန်းရွက်ပုတီး မြန်မာလက်ရာစစ်စစ်
ကဲလာ ကဲလာ ကြိုက်တာရွေးဝယ် ပြည်တွင်းဖြစ်လေးတွေချည်းဘဲနော်
ဖိုးကုလားဘုရားထဲက နံရံဆေးရေးပန်းချီနဲ့ လျှုိုဝှက်ဂူပေါက်ပုံတွေတင်ပေးပါမယ်။
အနော် မန်းလေးမှာနေတာ အနှစ် ၂၀ ကျော်ပြီ ရွှေစာရံကို နှစ်ခေါက်လားပဲ ရောက်ဖူးတယ် လူရှုပ်တဲ့ နေရာဆို သိပ်မကြိုက်တာနဲ့ အခါကြီး ရက်ကြီးဆို ဘယ်မှ သိပ်မရောက်ဖြစ်ဖူး တောင်ပြုံးဆိုတာလည်း အခုထိမရောက်ဖူးဘူး အိမ်ကလည်း ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် မသွားကြလို့ အနော်တို့ လက်ထက်လည်း မရောက်ဖြစ်ဖူး.. အခုလို လေးပေါက်ကျေးဇူးနဲ့ မြင် ရတွေ့ရတာပါ .ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ ကြည့်ဖူးတယ်..
ဒါနဲ့ လေးပေါက်ရယ် ဒီကော်နက်ရှင်နဲ့ ဒီပုံတွေ ကို တင်နိုင်တာ အရမ်းအရမ်းအရမ်းကို လေးစားပါတယ်
အလွန်အလွန့်ကို စိတ်ရှည် သီးခံနိုင်စွမ်းရှိသော လေးလေးပေါက်ပါ…. bravo….:)
ထန်းရွက်ပုတီးတွေ၊ ထန်းရွက်ငါးတွေ ဝယ်ချင်စရာပဲ။ သီးစုံကန်တော့ပွဲကလည်း စုံနေတာပဲ။ ဘုရားပွဲရက်တော့ ဟုတ်ဟန်မတူဘူး။ လူတွေသိပ်မများလို့။ ဒါတောင် ပစ္စည်းတွေ စုံစုံလင်လင်ရောင်းနေကြတယ်ဆိုတော့ အမြဲတမ်း လူသွားလူလာ များလို့ ဖြစ်ရမယ်။
နတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အသုံးအဆောင်တွေ တော်တော်ဦးစားပေးရောင်းတယ်နော်
ရွှေစာရံဘုရား ရောက်ဖူးဖို့နေနေသာသာ အရင်ကရွှေစာရံဘုရား ဘယ်နားရှိမှန်းတောင်မသိဘူး
ဘုရားမှာ နတ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကို မြင်ရတိုင်း စိတ်ပျက်မိတယ် …
ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရလွန်းလို့ …
မော်မဖူးပဲစေတီတော်ကိုအပြည့်မြင်နိုင်တဲ့နေရာလေး ဆိုပြီးအောက်က ပုံ လေးလေ ရေတွင်း အသေးစားလေးလေ ။ အဲဒါ ဘာသဘောလဲဟင် အဲဒီ့ ထဲကိုငုံ့ကြည့်ရင် စေတီကို တွေ့တဲ့သဘောလား
မြန်မာပြည်ရဲ့ ကိုးကွယ်ခြင်းတွေသည် ရောထွေးနေတာကြာပါပြီ။
အဲတော့ လိုက်ပြုပြင်လို့လဲ ရနိုင်မယ်မထင်ဘူးဗျ။
ဒီရွှေစာရံဘုရားတို့ တောင်ပြုံးတို့ဆိုတာ ဘုရားဖူးသက်သက်လာသူ နည်းပါးပါတယ်။
ကျနော်ကတော့ ဒုဌ၀တီရေတက်ချိန်လေးရယ် ဖိုးကုလားဘုရားက နံရံပန်းချီတွေကို ဓါတ်ပုံ ရိုက်ချင်လို့အရောက်သွားလိုက်တာပါ။
ကိုယ်လိုချင်တာယူပြီး မလိုချင်တာပယ်ထားတဲ့အကျင့်ကို ကျင့်နေတာကြာပါပြီ။
ဟုတ်ပါတယ် ရွှေစည်းခုံစေတီတော်က အတိုင်းပါဘဲ
ရှေးမြန်မာတွေ က လည်း တြီဂိုနိုမေတြီဘာသာရပ်ကို တတ်ကျွမ်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်.
ဟုတ်ပါတယ် ဘုရားပွဲရက်မဟုတ်ပေမယ့် စောမွန်လှနဲ့ဆက်စပ်ပါတ်သက်နေတဲ့အနွယ်တော်တွေက
လာရောက်ပူဇော်ပသလေ့ရှိတဲ့အတွက် ကန့်တော့ပွဲတွေ တွေ့ရတာပါ
ယုံတာ မယုံတာ အပထား ယုံကြည်သူများကတော့ သူယုံကြည်တဲ့အတိုင်းလုပ်ကြတာ သဘာဝတရားပါ။
ဘုရားပွဲက တော့ အကြာကြီးကျင်းပပါတယ်။
အဲဒီနေ့ဆို မန်းလေးက လူအကုန်လောက် ရွှေစာရံကိုရောက်နေကြပါတယ်။
ရွှေစာရံဘုရားပွဲသွားနေတုန်း မန်းလေးမြို့ရဲ့နာမယ်ကျော် ဦးကြားကြီး ၀င်းက စမီးလောင်လိုက်တာ
ပုံတွေကိုကြည့်ရတာ လွမ်းသလိုလို ဆွေးသလိုလိုဘဲ။ စေတီတော်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းလွမ်းတယ်၊ မြစ်ကြီးကိုမြင်ရတာ၊ မန်ကျည်းပင်ကြီးကိုမြင်ရတာ အင်း…. ဗမာပြည်ပြန်ရောက်ရင်တော့ သေသေချာချာသွားလည်ရမယ်။ ကျေးဇူးဘဲနော်။
လေးပေါက်တို. မန္တလေးကို ရွှေဘိုပြန်လို. တစ်ညပဲ ၀င်တည်းဖူးတယ်
နှံ.အောင်မလည်ဖူးသေးဘူး သမိုင်းဝင်မြို.တွေမို. လည်ချင်တယ် မန်းတောင်ရိပ်ကိုလည်းခိုဖူးချင်တယ်
လေးပေါက် လာလည်ရင် လိုက်ပို.မလား အသိမရှိဘူးဖြစ်နေလို့ ပြောလို.သာပြောရတာ
အခုလိုတင်ပေးတာကိုကလည်း လိုက်ပို.သလောက်ဖြစ်နေပါပြီ တော်တော်တောင်စုံနေပြီ
လေးပေါက် အဲ့ဒီနေ့က အင်္ကျီအပြာရောင် ၀တ်သွားတာမလား။ မန်ကြီးပင်ကြီးနဲ့ အောက်ခြေက ခြုံလေးတွေ မြင်ရတာ မျက်စေ့အေးသွားတာပဲ။ လေးပေါက်ရေ ဒီမှာတော့ အဲ့လို အလေ့ကျပေါက်ပင် မရှိသလောက်ပဲ။ အဲ့လို ခြုံလေးတွေ ဖြစ်အောင် တမင်တကာကို စိုက်ထားရတာ။ အောက်ခြေမှာ ပိုက်လေးတွေပါပါတယ်။ မှီတို့ ပြည်ကတော့ တကယ်ကို သဘာဝအလှတွေနဲ့ ပြည့်နေတယ်ဆိုတာ အပြင်ရောက်တော့ ပိုသိလာတယ်။ စိမ်းညှို့တဲ့တောင်တွေ ၊ ရေတသွင်သွင်စီးနေတဲ့ မြစ်တွေ၊ စိမ်းစိုတဲ့လယ်ကွင်းတွေ တကဲ့အလှတွေပါ။ ဒီမှာ မြောက်ပိုင်းမှာ အရမ်းလှတဲ့ ရေတံခွန်ဆိုပြီး ၀င်ကြေး အများကြီးပေးပြီ ၀င်ရတယ်။ သေသေချာချာတော့ ထိန်းသိန်းထားတာ။ ဒါပေမဲ့ ဒါလောက်များ ပွဲကောက်ရေတံခွန် အသေးလောက်တောင် လှတာမဟုတ်။ ဒါကို တကယ့် အလှဆုံးဆိုပြီး ခရီးသည်တွေကို ပြစားတာ။ မှီတို့လို ရေမြေကောင်းက လာသူတွေ အတွက်တော့ ရီစရာလေး ဖြစ်နေသလိုပါပဲ။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် မြန်မာပြည်အကြောင်းက အကောင်းအပြောမခံရတာများပါတယ်။
အဲတော့ မြန်မာဖြစ်ရတာကို ရှက်သူများလည်းရှိကြပါတယ်။
လောက မှာ ဘယ်နေရာမှာမဆို ကောင်းမျုိးနှစ်ထွေရောလို့နေပါတယ်။
အဲတော့ကာ မြန်မာပြည်မှာလဲ နေချင်စရာကောင်းတဲ့ နေရာဒေသလေးတွေ၊
ရှေးမြန်မာများရဲ့ ဂုဏ်ယူလောက်တဲ့လက်ရာတွေကို တမင်ရှာကြံလို့တင်ပေးနေရတာပါဗျာ။
မြန်မာပြည်မှာလဲ ဂုဏ်လောက်စရာလေးတွေရှိပါရဲ့ဆိုတာကို သိစေချင်လို့ပါ။